myanmar love stories: ဒီပိုး
Showing posts with label ဒီပိုး. Show all posts
myanmar love stories (19) ဒီပိုး (၁)
myanmar love stories (19)ဒီပိုး (၁) တချိန်ကမင်းကတော်ဘ၀နှင့်စမတ်ကျကျနေခဲ့ရသောဒေါ်နုနုခင်မှာယခုအခါ အရှိန်အ၀ါလေးသာကျန်ခဲ့၍ပစဏည်းပစဏရဆို၍ဘာတခုမှမယ်မယ်ရရမရှိသဖြင့် သူ့ လင်မသေခင်ကပင်လူယုံအဖြစ်မွေးစားထားသော ဒီပိုးနှင့်သာရှာဖွေစားသောက် နေကြလေသည်။မင်းကတော်ဘ၀ကပင်သိခဲ့ကဋ္ဌမ်းခဲ့သေါမိန်းမယောင်္ကျားအပေါင်းအသင်းများ ကားသူ့လင်ရှိစဉ်ကကဲ့သို့ပင်ဝင်ထွက်သွားလာလျက်အခင်မင်မပျက်ရှိ ကြလေ.၊ အချို့။အချို့သောသူများမှာသူ့လင်ရှိစဉ်ကထက်ပင်အ၀င်အထွက်များနေလေ သည်။ဒေါ်နုနုခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတဖက်သားကိုခင်မင်တတ်သည်။ကူညီစရာရှိလျှင်စိတ် ရောကိုယ်ပါကူညီတတ်သည်၊ယောင်္ကျားလေး။မိန်းခလေးလူကြီးလူငယ်မရွေးဖေါ်ရွေခင်မင်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သဖြင့်သူ့အားခင်ကြသည်။ချစ်ကြသည်။ငွေရေးကြေးရေးမှအစအကြပ် အတည်းတွေ့နေသူများသူ့ထံသွားလျှင်လက်တွန့်နောက်ရွံ့မနေဘဲတတ်အားသ၍သဘောထားကြီး စွာဖြင့်ကူညီလေ့ရှိ.၊ွှအချက်လေးများကားသူ့အတွက်ချစ်စရာအကွက်လေးများဖြစ်နေလေ သည်။သူ့လင်သေဆုံးပြီးနောက်သူ့တွင်စောစောကပြောသကဲ့သို့ဘာမှမယ်မယ်ရရမကျန်ခဲ့သည် မှန်သော်လည်းအိနြေရြရစားသောက်နေထိုင်ရုံတွင်မကခေတ်မှီပရိ ဘောဂ။ရေဒီယို။တိတ်ရီကော်ဒါ စသည်တို့ဖြင့်တင့်တင့်တယ်တယ်နေနိုင်သည်အ ထိကြိုးစားခဲ့လေသည်၊သူတို့ကောင်းစားစဉ်ကကေဋ္ဌးမွေးစောင့်ရှောက်ထားသော ဒီပိုးကလည်းကျေးဇူးသိတတ်လှသဖြင့်ရှာ၍ဖွေ၍ရသမျှကိုဒေါ်နုနုခင်အားပေးအပ်လေသည်၊ ဒေါ်နုနုခင်.အိမ်တွင်သဘောကောင်း၍နှမြောတွန့်တိုခြင်းမရှိသည်နှင့်အမျှ လူကြီးလူငယ်မိန်းမတို့နှင့်ယောင်္ကျားတို့မှာလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိ ကြ.၊အထူးသဖြင့်မနီးမဝေးမှမိန်းကလေးများမှာအားအားရှိလျှင်ဒေါ်နုနုခင်.အိမ် ကိုပင်သွား၍၀ိုင်းဖွဲ့ကာစကားပြော၍ရယ်မောနေကြသည်၊တိတ်ရကော်ဒါဖွင့်၍နား ထောင်ကြသည်။အသံသွင်း၍ပြန်ဖွင့်ကြသည်။တထောင်ကျော်တန်ပစဏည်းကိုမငြို ငြင်ဘဲပေးထားသဖြင့်မိန်းကလေးများမှာဝမ်းသာအားရပျော်ရ$င်နေကြသည်။သို့ သော်လည်းအချို့လူများကားမနှစ့်မြို့ကြပေ။သူတို့တတွေအနေနှင့်ကားတမျိုးမြင် နေကြသည်၊ ဒီမိန်းမဟာကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေကအစလူကြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်း ရောတရုတ်ကုလားရောစုံနေအောင်ပေါင်းတာဘဲ။ဒီလောက်လူပေါင်းစုံနေရင် ကောင်းပါအုံးမလားတခါတလေကောင်မလေးတွေကိုတိုးတိုးနဲ့ပုံးရှိုးဖွက်ရှိုးလှုပ် ရှားသွားလာနေတာထောက်ရတော့ဧကန်ဆိုရရင်မမှန်မှလွဲရောသဘောတမျိုးနဲ့အ လုပ်တမျိုးရှိတယ်ထင်တယ်ွှသို့ထင်မြင်သူများလည်းရှိလေသည်။၄င်းပြင်အချို့သောသူများကအမြင်တ မျိုးနှင့်သူတို့အထင်ကိုပြောကြပြန်သည်၊ ဒီမိန်းမကြီးဟာမင်းကတော်ဘ0ြJuyျက်လာတာခုတော့တံခါးမရှိဒါးမရှိထင်သလိုကြဲနေ လို့လူမျိုးစုံတဖွဲဖွဲဖြစ်နေတာ အချို့ကလဲရှိသေးသည်ငါတို့သိပါတယ်ကွာ ဒီမိန်းမကြီးရဲ့မွေးစားသားဆို တဲ့ဟိုဆွေမတော်မျိုးမတော် ဒီပိုးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ညားနေတွှာသို့မှန်းခြေနဲ့ရမ်းတွေးနေကြသည်ကိုအသာထား၍ရှင်းရှင်းနှင့်ဘွင်း ဘွင်းသိရန်အတွင်းသိတယောက်ကိုသာတီးခေါက်ပြီးမေးကြည့်လျှင်မည်မျှပင် ဟန်ဆောင်နေစေကာမူလူတကာနှင့်ဆက်ဆံနေခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကွင်းကွင်း ကွက်ကွက်သိရမည်မှာအသေအချာပင်ဖြစ်လေသည်၊ွှသို့ဆိုလျှင် ဒေါ်နုနုခင်တယောက်မျောက်ဇာတ်ဘဲခင်းနေသလားဒါမှမ ဟုတ်ဖါမအလုပ်ဘဲလုပ်နေသလား။သူ့ရဲ့မွေးစားသားဆိုတဲ့ဒီပိုးဆိုသူကကောရိုးရိုး သားသားမှဟုတ်ပါလေစ။ကဲသူတို့လုပ်နေသမျှအထုပ်ကိုဖြေပြရရင်ဟုတ်နိုင်မယ်မ ထင်လို့အချို့ကယုံချင်မှယုံကြပေလိမ့်မယ်၊မယုံလျှင်လဲပုံပြင်တခုဘဲလို့သာမှတ် လိုက်ပေတော့။တိုက်ရိုက်သာပြောရရင်သောတရှင်တို့ဘ၀င်ခိုက်ပြီးအကြိုက်တွေ့ လို့တို့လိုက်ချင်တယ်ဒေါ်နုနုခင်ရယ်ဆိုရင်တော့ကဋ္ဌန်တော်မတတ်နိုင်ပါခင်ဗျား၊ တနေ့သောညနေခင်းအချိန်ဝယ်ဒေါ်နုနုခင်.အိမ်တွင်မိန်းမပျိုတသိုက် ဟားတိုက်၍နေကြလေသည်။တခုခုအကြောင်းကိုသဘောတွေ့နေကြခြင်းပင်ဖြစ် လေသည်။ဒေါ်နုနုခင်.တပည့်လူယုံလက်စွဲတလင်ကွာတခုလပ်မ ခင်မြကတခုပြီး တခုပြလျက်ရှိသောအရာများကိုမိန်းမပျိုလေးများကခေါင်းချင်းဆုံ၍၀ိုင်းအုံပြီး ကြည့်နေကြသည်။ကြည့်နေရင်းက ရင်ကိုမ၍ဘုရားတသူ ကတကြသည်၊နှလုံး တုန်၍ရင်ခုံသူခုံ။စိတ်မောသူမောနေသည်။ွှလူအုပ်ထဲမှအကဲဆုံးကားဆပ်ကော့ လပ်ကော့ခတ်ပျံပျံခပ်ရွရွအပျိုပေါက်စလေးအ၀င်းနှင့်သေခါမှငှက်ပျောတုန်းနှင့်နပမ်းလုံးရမည့် အပျိုကြီးပူပူနွေးနွေးမခင်လေးတို့ပင်ဖြစ်လေသည်၊ ကြည့်ရတာရှက်စရာကြီး အပျိုကြီး မခင်လေးသည် ခင်မြကပြလျှက်ရှိသောဓါတ်ပုံတပုံကိုကြည့် ရင်းပြောလိုက်သည်။မျက်စိရှက်သည်ဆိုသော်လည်ွးှပုံကိုပင်မက်မက်မောမော ကြည့်နေလျက်လက်တွင်းမှအခုတိုင်မချနိုင်သေး။ ဓါတ်ပုံမှာမိန်းမတယောက်က ကုတင်စောင်းတွင်ပက်လက်လှန်၍ပေးထားပြီးလျှင်ယောင်္ကျားတယောက်ကမတ် တတ်ရပ်ခါလီးနှင့်စောက်ဖုတ်တပ်၍ထားပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုယ်တုံးလုံးနှင့်ဖြစ်လေသည်၊ ဓါတ်ပုံမှာကြည်လင်ပြတ်သားလှသဖြင့်လီးနှင့်စောက်ပတ်တတ်နေပုံမှာထင် ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နေရသဖြင့်အားရစရာကောင်းလှသည်။ အခြားပုံများမှာကား ယောက်င်္ကျားနှင့်မိန်းမအ၀တ်မပါဗလာကိုယ်လုံးတီးနှင့်နည်းအမျိုးမျိုးလိုးနေကြ သောပုံများဖြစ်လေသည်၊ အချို့မှာထပ်ရက် အချို့မှာလေးလက် အချို့မှာစောင်းရက်မျာ.ဖြစ်၍အချို့ မှာမတ်ထောင်ပြောင်တင်းနေသောလီးကြီးအား အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ဖြဲကြည့်နေ သောမိန်းမပုံ အချို့မှာလီးနှင့်စောက်ပတ်တတ်ထားသည့်အနီးကပ်ရိုက်ထားသော ပုံများဖြစ်လေသည်။ွှပုံများကိုသူငယ်မလေးများက၀ိုင်းအုံ၍အငန်းမရအားရပါးရ ကြည့်ပြီးရင်ခုံကြက်သီးထသဘောကျကာစိတ်မောနေကြခြင်းဖြစ်လေသည်၊ ငါ့ယောင်္ကျားဥစဏာလဲ အဲဒါကြီးလောက်ရှိတယ် တခုလပ်မ ခင်မြက ဓါတ်ပုံလဲမှ လီးကိုပြကာ ပြောလိုက်သည်၊ မမက သေသေချာချာကိုင်ကြည့်တာဘဲလား အလွန်ရွနေသော မဒန်းမလေး အ၀င်းကမေးကြည့်လိုက်သည်၊ ကိုင်တာများအဆန်းလုပ်လို့ တခါတလေသူမူးလာပြီး လုပ်တဲ့အခါများ သူ့လီး ကိုကိုင်ပြီး ငါ့ဟာပဲ့တေ့တေ့ပေးရတယ် ဒီလိုလုပ်မပေးရင် ဘေးချော်ချော်ထိုးလို့ ခံရတဲ့လူကို ပူနေတာဘဲ ဒါနဲ့ ဟိုနေ့ကပြောတော့ ကောင်းလှဆို ဟဲ့ အထဲဝင်သွားတော့ကောင်းတာပေါ့ ကောင်းတာမှ ညီးတို့လူ့ပြည်မှာရှိတာ တောင်သတိမရဘူး ၀ါး ဟား ဟား ဟား ခင်မြ.အဖြေကိုဝိုင်း၍ဟားလိုက်ကြသည်၊ မနာဘူးလား ဟင် မခင်လေးကသူ့စိတ်တွင်းရှိရာကိုတွေးနေရာမှဖြတ်၍မေး လိုက်.၊ အော် အစမှာနဲနဲတော့နာတာပေါ့ နောက်တော့နာတာတွေပျောက်ပြီး အရသာရှိလာတော့တာဘဲ အကျင့်မရှိသေးတဲ့လူဆိုရင်တော့ သိပ်နာမှာဘဲနော် မမ အပျံသင်စ အ၀င်း ကဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိ ကောက်၍မေးလိုက်ပြန်သည်၊ နဲနဲပါးပါးနာတာပေါ့အေ တဖြေးဖြေးကောင်း ကောင်းလာပြီး နောက်ဆုံးလူမှန် သူမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ကောင်းလွန်းလို့ ဒီအပေါက်ကြီးထဲ ဒါကြီးထိုးထည့်တာနဲ့ ဒီလောက်တောင်ဘဲကောင်းသလား အောင်မယ် ညီးကမကြုံဘူးသေးလို့ပါ အကြောင်းသိရအောင်တခါလောက်ခံ ကြည့်ပါလား အို မမကလဲ Posted by
myanmar love stories (19) ဒီပိုး (၂)
အ၀င်းကမချိုမချင်မျက်နှာပေးလေးနှင့်ပါးလေးများခဋ္ဌန်ထွက်လာအောင်ပြုံး လိုက်သည်၊သို့သော်လည်း အဟုတ်ခံကြည့်ချင်စိတ်တော့ပေါက်မိသည်၊ အမယ် ညီးကဟန်လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ ဒါရှက်စရာအလုပ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူး ဒီ မယ်ဂရာဝါသ တ%ှာရာဂဆိုတာ တဲစုတ်နဲ့နေတဲ့ဇနပုတ်ကလူတွေကအစ သမတအထိ ကာမဘုံသားတွေမှန်သမျှ ဘယ်သူမှမကင်းနိုင်ကြဘူး အဲဒီလိုမ ကင်းနိုင်ကြတဲ့အတူတူ ဗဟုသုတလဲရှိကောင်းမှန်းလည်းသိအောင်တခါလောက် ခံကြည့်ပါလား။ မခင်လေးကတောင် ဘယ်သူမှမသိရင်တခါလောက်ခံကြည့်ချင် တယ်လို့ပြောနေတယ် ၀ါး ဟား ဟား ဟား ခင်မြကအ၀င်းကိုပြောရင်းအပျိုကြီးပူပူနွေးနွေး မခင်လေးဘက်သို့လှည့်လိုက်သဖြင့် မခင်လေးမှာအငေးသားဖြင့် ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားစဉ်ဝိုင်း၍ဟားတိုက် လိုက်ကြပြန်သည်၊ မခင်လေး။အ၀င်းနှင့်အဖေါ်များသည်ဒေါ်နုနုခင်.လူယုံလက်စွဲတော် ခင်မြ နှင့်ပေါင်းနေကတည်းက ခင်မြက တစတစနားချထားသဖြင့် နား။ပါးစပ်။မျက်စိ များပါယဉ်နေကြလေပြီ၊လီးရောစောက်ပတ်ပါမကျန်ခံသည်။ချသည်။ဆော်သည်။ လိုးသည်ဟူသောအပြောအဆိုမျိုးကိုကြားရဖန်များသဖြင့်ကျင့်သားရပြီးအားရပါးရ ပြောတတ်လာကြသည့်အပြင် တွင်တွင်ကြီးလက်ချာပေးနေသော ခင်မြ.အပြော အဟောကလဲတဖြေးဖြေးနားဝင်။မြင်ရသည့်အရာဝတျွှုတွေကလဲအားကျစရာ။ဒီဘ၀မှာတခါလောက် တော့တွေ့လိုက်ချင်ပါရဲဟုစိတ်တွင့်းကြိတ်၍မျှော်လင့်တောင်းတနေမိကြသည်ကိုသူတို့ကိုယ် သူတို့သာလျှင်သိသည်ထင်နေကြသော်လည်းအမှန်မှာကားကျင့်သားရ၍လက်တွေကြုံရန်ဟန် လုပ်စောင့်မျှော်နေပြီဖြစ်သောသူလေးများအားအချိန်မရွးအသုံးချ၍ရနေပြီကိုဒေါ်နုနုခင်နှင့်သူ. သားလင် ဒီပိုးတို့ ကသိနေကြပြီးဖြစ်သည်ကိုသူတို့ခမြာမသိရှာ၊ ယနေ့ နေ့လည်ဒေါ်နုနုခင်.အိမ်တွင်ခါတိုင်းနှင့်မတူလူရှင်းလှသည်။ ပြောမဲ့သာပြောရသည် ခါတိုင်းလည်းနေ့လည်နေ့ခင်းတွင်လူရှင်း၍ညနေပိုင်းတွင် သာသူအလာများသည်။သို့သော် ယနေ့ နေ့လည်တွင်ခါတိုင်းနေ့ထက်ပို၍လူရှင်း နေသည်၊ဒေါ်နုနုခင်တယောက်သာအပေါက်ဝကိုခေါင်းပြု၍အိပ်နေသည်၊ထိုအ ခိုက်ခြေသံပြင်းပြင်းနင်း၍၀င်လာသောအသံတခုကိုသတိပြုလိုက်မိသောဒေါ်နုနု ခင်သည်ခေါင်းငဲ့၍လှည်လိုက်ရာ ဒီပိုးဖြစ်နေသဖြင့်တိုးတိုးတိတ်တိတ်လက်ရိပ်ပြ ခါသု့အနားသ်ု့ခေါ်လိုက်လေသည်၊ မင်းကလဲ အစောကြီးကထွက်သွားလိုက်တာ ခုမှဘဲလာတော့တာဘဲ ဒေါ်နုနုခင်သည်အိပ်ရက်မှမှောက်ရက်သို့ပြောင်းရင်းပြောလိုက်သည်၊ အကြောင်းထူးရှိလို့လား အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အ၀င်းကိုဇာတ်သွင်းရရင်မ ကောင်းဘူးလား ဒါလား ဒါကိုအစောကြီးထဲကကဋ္ဌန်တော်ပြောနေတာ မမကနေအုံးဆိုလို့ ငါကကောင်မလေး ယဉ်သထက်ယဉ်ပါးပြီးစိတ်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နေရတုန်း မို့ပြောတာခုနေဆိုရင် အသာလေးဘဲ ဒါဖြင့်ဘယ်တော့လဲ ခုဘဲ လုပ်ပါလား သူကကော စောစောကဘဲသူ့အမေဆူလို့ဆိုပြီး ဒီမှာလာအိပ်နေတယ် ကဋ္ဌန်တော်ထမင်းလဲမစားရသေးဘူး မမရဲ့ မဆာသေးရင်လဲနောက်မှစားပါလား ခုအချိန်ရှိတုန်း ကဲ ဒီလိုဆို မမအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတော့ ကဋ္ဌန်တော်ကြည့်လုပ်လိုက်မယ် ဒီပိုးမှာရှပ်အကျီကိုခဋ္ဌတ်၍ချိတ်တွင်ချိတ်လိုက်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်ခဲ့လေ.၊ အ၀င်းမှာဘယ်ဘက်သို့စောင်း၍အိပ်ပျော်နေသော်လည်းလူးလွန့်ထားသ ဖြင့်ထမိန်မှာအပေါ်သို့တွန့်၍တက်နေသည့်အတွက်ကွေးထားသောညာဒူးလေး မှာအဖွေးသားပေါ်နေလျက်ဆန့်ထားသည့်ဘယ်ခြေထောက်မှာဒကောင်ကွေးအထက်ပေါ်နေသည် ပေါင်သားများမှာလည်းအဖွေးသားနှင့်သွေးကြောလေးများမှာအထင်းသားပေါ်နေသည်၊ ထိုမှတဖန်ဝတ်ထားသောပုခုန်းတင်လက်ပြတ်အကျီပါးလေးကလည်းလူး လှိမ့်ထားသဖြင့်အထက်သို့တွန့်တက်နေသည့်အတွက်ခါးအထက်မှဇာပေါက် ဘော်လီအကျီလေးသာမကဘေးသားလေးများက လည်းပေါ်နေပြန်သည်၊ဘော်လီ ရင်ပုံအောက်မှရင်သားနှစ်စုံ နို့အုံလေးများတို့မှာစူထွက်နေသဖြင့် ဘော်လီ အကျီတ၀က်လောက်ရှံကျနေလေသည်၊ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် အပျိုပေါက်နုနုထွတ်ထွတ်လေးမို့ပကတိသန့် ရှင်းသောစင်းလုံးချောတောင့်တောင့်တင်းတင်းကြွကြွရွရွမဒန်းမလေး အ၀င်းမှာ မကြာ ခင်ဒီပိုးအောက်သို့ရောက်ရတော့မည်ကိုမသိသေးဘဲ ကွေးကွေးလေးအိပ် ပျော်လျက်ရှိနေလေသည်၊ဒီပိုးသည်ခေတျွှမျှရပ်နေရင်းကအဖုံးအကာမရှိဝင်းဝါနေသည့်ပေါင် သားလေးကိုကြည့်မိလျှင်ပင်ရင်ထဲမှတဒိတ်ဒိတ်ခုန်၍ပေါင်ကြားမှလီး ကလည်းတဆတ်ဆတ်ခုန်ကာမတ်ထောင်၍လာလေတော့သည်၊နောက်မှတဖြေး ဖြေး အ၀င်း.ဘေးသို့ထိုင်ချလိုက်လေသည်၊ ဒီပိုးသည်ပဌမဦးစွာနို့အုံအပေါ်တွင်တ၀က်တပျက်တင်နေသေးသောဘော်လီ အကျီစလေးကိုခပ်ရွရွနှင့်အသာကိုင်ကာ အောက်သို့ဆွဲချလိုက်ပြီး ကြယ်သီး များကိုဖြေးဖြေးခြင်းဖြုတ်လိုက်ရာ ဘော်လီအကျီနှစ်ဖက်မှာ ပွင့်ထွက်သွားသည် နှင့်အမြဲတမ်းဖုံးအုပ်ကာကွယ့်ထားခဲ့သောရင်သားသည်အတားအဆီးအကာအ ကွယ်အရှိတော့ဘဲပကတိအသားဆိုင်အသားခဲနို့နှစ်လုံးမှာတသက်လုံးဖုံးထားသမျှ ခုမှဘွားဘွားကြီးပေါ်ထွက်လာလျက်တောင်ပူစာလေးနှစ်လုံးကဲ့သို့အုံများပါစူထွက် နေ၍နို့သီးခေါင်းလေးများကငေါက်တက်ကလေးဖြစ်နေ.၊ ထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်ဒီပိုးမှာနို့နှစ်လုံးကိုဆုတ်ကိုင်၍ဆွဲလိုက်ချင် စိတ်ပေါက်လာလေ.။ထိုခ%့အ၀င်းသည်မနည်း၍ယ်လူးလွန့်လာပြီးစောင်းနေ ရာမှပက်လက်လှန်လိုက်သဖြင့်ဒီပိုးမှာခ%မျှအသာငြိမ်နေလိုက်ရသည်။သို့သော် လည်းအ၀င်းမှာဘာကိုမှမသိဆက်လက်၍အိပ်ပျော်မြဲအိပ်ပျော်သွားပြန်သည်၊ပက် လက်အနေအထားဖြစ်သွားသဖြင့်၇င်ဘတ်တခုလုံးမှာဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ် နေလျက်နို့နှစ်လုံးမှာခုမှပင်သာ၍ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လွင်လျက်ရှိနေလေ.၊ ဟင်း ဒီပိုးသည်အားမလိုအားမရသက်ပျင်းတချက်ချလိုက်ပြီးစားရတော့မည့်အ မဲကောင်မှာသူ့အားဖိတ်ခေါ်နေသယောင်ရှိနေသည့်ကိုတချက်မျှကြည့်လိုက်ပြီး နောက်အရစ်အရစ်ပေါ်နေသောဒူးဆစ်အပေါ်မှထမိန်အောက်နားစလေးကိုအသာအယာမ၍တင် လိုက်ရာပေါင်တ၀က်သိုအရောက်စိတ်မလုံသဖြင့် အ၀င်း.မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မိသည်၊ အ၀င်းမှာကားစောစောကအတိုင်းမလှုပ်မရှက်အိပ်မြဲ အိပ်လျက်ပင်ရှိနေသည် ကိုတွေ့လိုက် ရသဖြင့်ထမိန်စလေးကိုခါးအထက်ရောက်အောင်ဆက်၍လှန်တင်လိုက်သည့်အခါတွင်ကား ပြည့်ဖြိုးဝင်းဝါလျက်အိစက်နေသောပေါင်နှစ်လုံးကြားမှမုန့်ပေါင်းလေးကဲ့သို့မို့မို့လေးနှင့် ဖေါင်း၍ခုံးထနေသောစောက်ပတ် လေးမှာအတိုင်းသားပေးထွက်လာလေတော့သည်၊ အ၀င်း.စောက်ပတ်လေးမှာအမေ$းအမှင်တပင်မှမရှိဘဲပြောင်တင်းပြီး ကြည့်မ၀ရှုမ၀။ချလိုက်ရရင်အရသာရှိလိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း။လက်ငင်းဒိဌသိရတော့မှာမို့ ဒီပိုးမှာမငန်းမရဖြစ်လာတော့သဖြင့်စောက်ပတ်လေးအပေါ်သို့လက်ဝါးနှင့်အုပ်၍ ခပ်ပိပိလေးဖိလိုက်လေ.။၄င်းနောက်စောက်ပတ်ခုံးခုံးလေးကိုဖုံး၍အုပ်ထားသော လက်ဝါးနှင့်အထက်အောက်ပွတ်သပ်၍ပေးလိုက်နေမိ.၊အ၀င်းမှာခုချိန်ထိဘာမှမ သိသေးသည့်အလားအိပ်မောများကျနေသေး.။ွှမျှနျင့်မပြီးလိုရာခရီးေ၇ာက်ရန်အရေးကြီးလာ ပြီဖြစ်သဖြင့်အ၀င်း.ဒူးနှစ်လုံးကိုတွန်း၍ထောင်လိုက်လေသည်။ွှ အချိန်အထိက၀င်းကမနိုးသေး၊ဒီပိုးသည်အ၀င်း.ဖင်တည့်တည့်တွင်ဆောင့် ဆောင့်ထိုင်လိုက်၍လီးကိုကိုင်ပြီးတံတွေးဆွတ်လိုက်.။၄င်းနောက်လီးကိုအ၀င်း.စောက် ပတ်အ၀သို့တေ့လိုက်ပြီးသည်နှင့်လက်နှစ်ဖက်ကအ၀င်း.ပုခုန်းနှစ်ဖက်ကိုကုန်း၍ဆွဲလိုက် ရင်းရင်ချင်းကပ်ချလိုက်လေတော့.၊ အား Posted by
myanmar love stories (19) ဒီပိုး (၃)
အ၀င်းမှာကျောချမှဒါးပြမှန်းသိဆိုသကဲ့သို့သူ.စောက်ပတ်အတွင်းသို့မာ တောင်နေသောလီးချောင်းကြီးဝင်လာခါမှခါးသာမကကျောပါကော့တက်သွားရင်း အားကနဲနေအောင်ယောင်၍အော်လိုက်မိလေ.။ယခုမှပင်ဒီပိုးကသူ့အပေါ်ကထပ်ရက်ကြီးဖက် ပြီးလိုးနေသည်ကိုသိရလေတော့သည်၊ အမလေး လေး လေး နာလိုက်တာ အကို ဘယ့်နဲ့လုပ်တာလဲ ဒေါ်ဒေါ်လာပါအုံး အ၀င်းမှာအောက်မှနေ၍ဖျပ်ဖျပ်လူးမျှခံနေရသော်လည်းဒီပိုးမှာကားထပ်ရက် သားမှတပြားသားမှမလျှော့ပေ။ကော့၍ကော့၍ထိုးနေသောအ၀င်း.ခါးကိုသာဖိ၍ဖိ၍ချနေလေ သည်၊ အမလေး သေပါပြီ ဒေါ်ဒေါ် ဒေါ်ဒေါ် အမလေးတော့ ကဋ္ဌတ်ကဋ္ဌတ် အကို ဖယ်ပါ အကိုရယ် အ၀င်းကအောက်မှနေ၍ထွန့်ထွန့်လူးနေလျက်ဒီပိုး.ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထိုးရုန်းကန် နေလေသည်၊သူမ.စောက်ပတ်လေးနခမ်းသားများစုတ်ဖြတ်သွားသဖြင့်ပူစပ်စပ် နှင့်နာကျင်လွန်းသည့်အတွက်ရှေ့နောက်မစဉ်းစားမိတော့ဘဲဒေါ်နုနုခင်ကိုလှမ်း၍ ခေါ်နေမိခြင်းဖြစ်လေသည်၊သို့သော်လည်းအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသူကိုနှိုးရခက် သည်မဟုတ်ပါလော။ွှသဘောအရဒေါ်နုနုခင်ကတော့တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပေ၊ တော်တော်နာသွားသလားဟင် ဒီပိုးကလီးကိုတ၀က်လောက်အထိသွင်းပြီးရပ်ထားရင်းကမေးကြည့်လိုက်.၊ နာတယ် အကိုရာ နာလွန်းလို့ပါ ဖယ်ပါ ဒီပိုးကဆက်မလိုးသေးဘဲရပ်ထားသေး.၊ ခ%နာတာပါ တော်ကြာကောင်းသွားမှာပါ တော်ပြီ အကိုရာ တော်ပြီ တော်ပြီ မဟုတ်သေးဘူးလေ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာမြင်ရတယ်မို့လား သူတို့ဘာလို့လုပ်ကြ တာလဲ ကောင်းလို့လုပ်ကြတာ နောက်ပြီးမခင်မြကိုမေးကြည့်စမ်း ဒါမျိုးဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာ အို ဒါတွေ ကဋ္ဌန်မ မသိဘူွးှသို့ပြောလိုက်ရသော်လည်းမခင်မြပြောသည့်စကားများနှင့် ပြသည့်ဓါတ် ပုံများအကြောင်းကိုဒီပိုးသိနေနှင့်ပြီကိုအ၀င်းကနားလည်လိုက်လေသည်၊၄င်းပြင်ဒီ ပိုးသတိပေးမှသူတို့အငန်းမရကြည့်ခဲ့ရသောပက်ပက်စက်စက်လိုးနေကြသည့် ဓါတ်ပုံကိုမြင်ယောင်လာမိလေ.၊ွှမျှမက မခင်မြပြောသောစကားများကိုလည်း နားဘဲ့ကြားယောင်လာမိပြန်သည်။ (အကြောင်းသိရအောင် ညီးတခါလောက်ခံ ကြည့်ပါလား)နောက်ပြီး(အစတော့နာတာပေါ့ နောက်တော့ကောင်းလွန်းလို့ အရသာရှိပြီး ညီးတို့လူ့ပြည်မှာရှိတာတောင်သတိမ၇တော့ဘူး)။ွှအတွေးများ ကသူမအားဖေးဖေးမမနှင့်အားပေးသလိုဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှအစကစိတ်ကူးနှင့် ရူးလာခဲ့ရသည်ကိုယခုလိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ တွေ့ရချိန်တွင်ကြိတ်မှိတ်၍ဘယ်လိုအ ရသာများလဲလို့ ခံစားကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်လာမိလေ.၊ သို့သော်ယခုလိုလူမြင်မတော်အောင်ထပ်ရက်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတခြားလူ များမြင်သွားမှာကိုကားရှက်မိသေးသည်၊ဒီပိုးကားရပ်ထားရာမှတချက်ချင်းတချက်ချင်းဖြေးဖြေး နှင့်မှန်မှန်လိးကိုထိုးသွင်းလေ.၊ အကို ဖယ်ပါအကိုရယ် တော်ကြာလူတွေမြင်သွားရင် မကောင်းဘူး အို ဘယ်သူမှမမြင်ဘူး စိတ်ချ အိမ်ရှေ့တံခါးကိုအထဲကဂလန့်ထိုးထားတယ် မမလဲ မရှိဘူး ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဘဲရှိတယ် ဟင် ဒေါ်နုနုခင်မရှိဆို၍အ၀င်းမှာဟင်ကနဲဖြစ်သွား.၊ တော်ပြီအကို ကဋ္ဌန်မနာလို့ပါ ဒီလောက်ဆို တော်ရောပေါ့ အို ဒီလောက်နဲ့ဘယ်ကောင်းမှန်းသိအုံးမလဲ ကဲကဲ ခ%လေးအောင့်လိုက်ပါ ခုဘဲ ကောင်းလာမှာ ဒီပိုးသည်လီးကိုမနှေးမမြန်မှန်မှန်လေးထိုးထိုးထည့်နေလေ.။ ပြောမဲ့သာ ပြောရသည် အ၀င်းကတော့တစတစနှင့်ကောင်းမှန်းသိလာနေပြီကိုသူ့ပေါင်နှစ် ဖက်ကအလိုလိုကားကားသွားခြင်းကသက်သေခံနေပေပြီ၊ အကို ဘာလဲအ၀င်း လူတွေသိကုန်ရင်ခက်တော့မှာဘဲရှင် ဖယ်ပါတော့ အကိုရယ် ဘယ်သူမှမသိဘဲ ဘာခက်ရမှာလဲ အ၀င်း ဟင် ကောင်းလား အို မသိပါဘူးအကိုရယ် တော်ပါတော့ ဒီပိုးက တကယ်တန်းတော်သွားမှာတော့ အ၀င်းကစိုးရိမ်နေလေ/ပီ။ အ ကြောင်းသော်ကား ကောင်းမှန်းသိလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်တည်း၊ဒီပိုးက အ၀င်း.နို့အုံ နျစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနောက်နို့သီးခေါင်လေးများကိုလက်မ နှင့်လက်ဍှိုးးဍှပ်ခါပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရာနို့သီးခေါင်းလေးများသည်မာ၍တောင့် လာလေသည်၊ အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ အို ယားတယ် ဒီပိုးကတော့ပြုံးလိုက်မိသည်။ကလိပါများတော့လဲဘာသားထုထားတဲ့လူမို့ ခံနိုင်မှာလဲ အ၀င်းရယ်ဟွှုသို့တွေးရင်းပြုံးလိုက်မိခြင်းဖြစ်လေသည်၊ ကဲ အကို လူတွေလာရင်သိကုန်ပါ့မယ် မြန်မြန်လုပ်ပြီး မြန်မြန်ပြီးပါတော့ ဒီပိုးမှာဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန်တချက်ချင်းလိုးသွင်နေရာမှခပ်သွက်သွက် လေးဖိဖိလိုးလေတော့.။အ၀င်းမှာမျက်နှာလေးကိုရှုံ့ခါမဲ့ခါနှင့်ခေါင်းလေးကိုဘယ်ညာရမ်းပြီးဒီ ပိုး.ရင်ဘတ်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆီးတွန်းထားလေသည်၊ ဒီပိုး သည်တခါတရံအားမလိုအားမရဖြစ်လာသည့်အတွက်တချက်တချက်ခပ်ပြင်းပြင်း လေးလိုးထည့်လိုက်.။ွှအခါတွင် အ၀င်းမျက်နှာလေးမှာမဲ့သွားပြီးမျက်လုံးကိုစုံ မှိတ်၍အံကြွတ်ထားလိုက်ရသည်၊ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါအကိုရာ ကဋ္ဌန်မ မခံနိုင်ဘူးထင်တယ် အနာသက်သာသွားပြီ မို့လား ဒါတော့ဒါပေါ့ ဒါပေမဲ့ တော်ချင်ပြီ အချိန်ကျတော့တော်ရမှာပေါ့ဟာ ဒါဖြင့်လည်းမြန်မြန်လုပ်ပါ လူတွေများသိကုန်ရင်တော့ဒုကျှပါဘဲရှင် ဒီပိုးမှာပြန်ပြောမနေတော့ဘဲ အ၀င်း.ဂျိုင်းနှစ်ဖက်အောက်မှလက်လျှို၍ ကုန်းကုန်းလိုးလေတော့သည်၊အ၀င်းမှာ အရသာတွေ့သထက် တွေ့လာပြီဖြစ်သ ဖြင့်စိတ်တွင်းမှမရိုးမ၇ွဖြစ်လာ/ပီးထိုးထိုးထွန့်ထွန့်ဖြစ်လာခါ ခါးလေးကိုပါ မသိမ သာကော့ကော့ပေးနေမိလေ.။ဒီပိုးကလည်း စောစောကအတိုင်းခတ်ပြင်းပြင်း လေးဆောင့်သွင်းနေလျက်ရှိရာမကြာခင်ပင်အ၀င်း.လက်နှစ်ဖက်ကဒီပိုး.ကြော ပြင်ကြီးကိုသိုင်း၍ဖက်ထားလိုက်မိပြန်သည်။ အ၀င်း ရှင် ကောင်းတယ်နော် အင်း စကားမပြောတော့ဘဲ ဒီပိုးကလည်းအပေါ်မှစီး၍လီးကိုအရင်းရောက် သည်အထိဖိဖိလိုးနေသည်နှင့်အမျှ အရသာတွေ့နေသော အ၀င်းကလည်းမျက် လုံးလေးများကိုမှေးလျက်ခံနေလေတော့.။ထိုခ%့အ၀င်းပါးစပ်မှအသံထွက် သွားပြန်လေ.၊ အမလေး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် နာသွားသလား မနာပါဘူး မနာပါဘဲနှင့်အမလေး တခြင်း.အကြောင်းရင်းမှာ ကောင်း၍သာဖြစ်ရပေ မည်၊
myanmar love stories (19) ဒီပိုး (၄)
myanmar love stories (19)အကို မြန်ြမန်လုပ်ပါတော့ အကို အ၀င်းမှာစောက်ပတ်တွင်းမှယားသထက်ယားပြီးမနေတတ်အောင်ဖြစ်လာ ပြီဖြစ်သည့်အတွက်စောက်ပတ်အတွင်းမှအရည်များပါစီးကျလာလေ.၊၄င်းပြင်အ သက်ရှူသံလည်းပို၍ပြင်းလာပြီးနှုတ်ခမ်းလေးများပါတဆတ်ဆတ်တုန်ကာမျက် လုံးလေးများကပါနီလာလျက်တ%ှာစိတ်များအလွန်အမင်းပြင်းပြထကြွလာလျက် ရှိနေလေတော့.၊ ကဲ ဒါဖြင့်လိုးမယ် ခုရောလိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလား ဟင်း အကိုသိပ်ဆိုးတာဘဲ စိတ်ပါလက်ပါလိုးမယ်ပြောတာ အမလေး အားရပါးရတော့မလုပ်ပါနဲ့ ခုအတိုင်းဘဲလုပ်ပါ ခုအတိုင်းကကောင်းတယ်ဆိုပါတော့ အို မေးမနေစမ်းပါနဲ့ လုပ်မှသာလုပ်ပါ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး လိုးတာ တော်စမ်းပါ ဒီလိုးစကား ရှက်စရာကြီး ဒီပိုးကပြောရင်းဆိုရင်းဆက်၍လိုးလေတော့.၊ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အမလေး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကောင်းလိုက်တာ အကိုရာနေရာမရေ$့ဘဲ ခု အတိုင်းသာလိုးစမ်းပါ ဒီပိုးမှာ အားရပါးရစိတ်တိုင်းကျလိုးလိုးထည့်နေသဖြင့်လီးနှင့်စောက်ပတ် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်တိုင်း စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ဟူသောအသံများမှာ ဇက်တိုက်ပင် မည်နေလေ.၊ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ကောင်းလား အ၀င်း ကောင်းတယ်အကို သိပ်ကောင်းတာဘဲ လိုးပါအကိုရယ် ရပ်မထားစမ်းပါနဲ့ အ၀င်းကားဒီပိုး.တကိုယ်လုံးကိုသိမ်းကြုံး၍ဖက်ထားရင်း ဖင်ကိုမြောက် မြောက်ပေးနေ.၊ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အမလေး အမလေးအကို အမလေး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ်သိပ်ကောင်းတာဘဲ အကိုရာ ဆက်ဆက်လိုးစမ်းပါ ဒီပိုးကခပ်သွက်သွက်လေး ဆက်ခါဆက်ခါလိုးပေးလေ.၊ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ဟုတ်ပြီ ထိုးထိုးခပ်နာနာလေးထိုး လိုးပါအကိုရဲ့နာနာ အ၀င်းတယောက်တော့ခက်လေပြီ။ကောင်းမှန်းသိလေအြိေ မဆယ်နိုင်လေ ဖြစ်နေလေ.၊ အကို အကို လိုးပါအကို ကောင်းတယ်အကိုရာ သိပ်ကောင်းတာဘဲ အမလေး အရသာရှိလိုက်တာနော် ဒီပိုးကလည်းသူ.လီးကိုအနားမပေးဘဲစိတ်ပါလက်ပါတကြိုးထဲလိုးလိုက် ရာနောက်ဆုံးအ၀င်း.စောက်ပတ်အတွင်းသို့သူ.လီးမှလပြွတ်ရည်များပြွတ်ကနဲ ပွတ်ကနဲပန်း၍ထွက်သွားသည်နှင့်အမျှ နှစ်ဦးနှစ်ဝကျေနပ်မှု့ရသွားကြသဖြင့်ခြေ ကုန်လက်ပန်းကျသွားကြလေတော့သတည်း၊ အ၀င်းနှင့်ဒီပိုးတို့လိုးကြခံကြပြီးနောက်ဆယ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဒေါ်နုနုခင်မှာခပ်ရွယ်ရွယ်လူတဦးနှင့်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြိတ်၍စကားပြောနေ လျက်အ၀င်းမှာတိတ်ရကော်တာဖွင့်ကာနားထောင်နေလေ.၊ထိုအချိန်တွင်ဒီပိုးမှာ ကားပြည်လမ်းမှတိုက်အိမ်တအိမ်သို့ရောက်နေလေသည်၊ မင်းမလဲ မှာမှဘဲရောက်လာတော့တယ် လာမလို့ဘဲ မမမြင့်ရဲ့ နေလို့နဲနဲမကောင်းတာနဲ့မလာဖြစ်တာ အမယ်လိမ်မနေစမ်းပါနဲ့ နေမကောင်းဘူးသာဆိုတယ် အိမ်မကပ်ဘူးဆို ဘယ်သူပြောသလဲ မင်းမယားကြီးနုနုခင်ပြောတယ် မဟုတ်တာ မမရာ ကဋ္ဌန်တော့်မယားကဒီမှာဘဲဥစဏာ ဒီပိုးက ပြောပြောဆိုဆို မမမြင့်ဆိုသူကိုထ၍ဖက်ထားလိုက်.၊ဒီပိုး ကား ခေသူမဟုတ်။အပျိုနုနုထွတ်ထွတ်လေးများအား ဖါဖြစ်ရန်ဇာတ်သွင်းပြီးဒေါ်နုနုခင် လက်သို့အပ်လိုက်.၊ွှမျှနှင့်မကလင်ကြီးငုတ်တုတ်နှင့်အားမရနိုင်သည့်တ%ှာ တုံးတ%ှာခဲကြီးများဖြစ်ကြသောအထက်တန်းလ$ာမှမအ၀ှါ။မမ။ဒေါ်ဒေါ်။ကတော် ကြီးများအားပျော်တော်ဆက်ရသေးသည်၊ ပျော်တော်ဆက်ခများပင်ရလိုက်သေး သည်၊ယခုလည်းအဆီအသားများကိုစား၍အလကားအားနေရင်းယားနေကြသော အထက်တန်းစားများအနက်ပြည်လမ်းမှစောစောကပြောခဲ့သည့်ခင်စောမြင့်. အယားကိုဖြေဖျောက်ပေးရန်ရောက်ခဲ့ပြန်လေသည်၊ အဆိုပါထိုထိုသောတ%ှာအိုးမကြီးများအားဒေါ်နုနုခင်ကကံထရိုက်ဆွဲကာ ဘယ်လောက်ပင်လိုးလိုးတပါတ်မဍှိုးသည့်ဒီပိုးကိုလူမရိပ်မိစေရန်အနှိပ်သယ်ဟန် ဆောင်၍စေလ$တ်နေခြင်းဖြင့်တဖက်တလမ်းကစီးပွားလမ်းဖြောင့်နေလေသည်၊ အိမ်သားတွေကော မမမြင့် အင်းယားသွားကြတယ် ဒါဖြင့် မမမြင့်တယောက်ထဲကျန်ခဲ့တာပေါ့ အနှိပ်သယ် နဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်ပေါ့ မကြောက်ဘူးလား မကြောက်ပေါင် ကဲ ဒါဖြင့်နှိပ်ကြစို့လား အမလေး လေးလေး တကတဲမှဘဲ အနှိပ်သယ်ကလဲရဲဘဲ ရဲလွန်းလဲတယ် တော် ဒါဖြင့်ရင်လဲ ဒီနေရာတင်ဘဲနှိပ်ကြစို့ ကဲ ပက်လက်လှန် ဟင်း သူသိပ်ကဲတယ် လာရေအရင်ချိုးကြအုံးစို့ ခင်စောမြင့်မှာအသက်၃၀ ကျော်သာရှိသေးသည့်အတွက်အသားအရေစို စိုပြေပြေနှင့်ရုပ်ရည်ကမှအစလှတုန်းပတူန်းအရွယ်ဖြစ်သည့်ပြင်ပစဏည်းဥစဏာပြည့်ဝသူဖြစ်၍ လည်းအေးအေးလူလူပူစရာမရှိ။ဇိမ်ရှိရှိနှင့်နေရသဖြင့်သူ့ကိုယ်သူအမြဲတန်းသပြီးအလှအပကို သာလျှင်ပြုပြင်နေသည့်အတွက်အပျိုလားအအိုလားခွဲခြား၍မရ အောင်ပင်တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးဖြစ်နေသည်သာမကတင်ပဆုံကြီးများမှာ ကား၍တင်ပါးသားကြီးများမှာတုန်တုန် တုန်တုန်နှင့်ဖြစ်နေလေ.၊ သူမ.လက်မောင်းအိုးများကလည်းပြည့်ဖြိုးဝင်းဝါနေလျက်အသားအရေ များမှာမူချောမွတ်စိုပြေပြီးဝင်းနေယုံမျှမကနို့အုံကြီးကြပြန်တော့လည်းတလုံးတခဲ ကြီးနှင့်နို့ပြင်းတွဲများလိုမဟုတ်ဘဲကဋ္ဌဲကောသီးအခွံကြီးများမှောက်ထားသလိုကြီး ကြီးထွားထွားကြီးနှင့်ခုံးခုံးမို့မို့ကြီးဖြစ်နေသဖြင့်လမ်းထွက်တဲ့အခါယောက်ကျားများ ကအဆမတန်ကြီးသောသူ့ရဲ့နို့အုံကြီးကိုအငန်းမရကြည့်ကြည့်သွားကြသည့်အခါ သူကိုယ်တိုင်ကပင်သဘောကျမိလေတော့သည်၊ွှမျှအသားအရေဆူဖြိူးတောင့်တင်းနေသူမှသူ့လင်ရှူနာရှိုက်ကုန်းနှင့်လုံး လုံးအားမရ။ကာမအရသာကိုပြည့်ပြည့်၀၀အားရပါးရခံစားချင်လှသဖြင့်နေ့စဉ်နှင့် အမျှတောင်းတမျှော်လင့်နေစဉ်။ယခင်ကပင်ခင်မင်ခဲ့သောနုနုခင်.တည်ထွင်ပေး မှုကြောင့်အနှိပ်သယ်အသွင်ဖြင့်ဒီပိုးကိုမကြာမကြာခေါ်၍အလိုးခံရင်းအာသာဆနြ ကိုဖြည့်စွမ်းနေရလေ.၊ ရေချိုးခမ်းတွင်းသို့ခင်စောမြင့်ကအရင်ဝင်သွား၍သူ့တကိုယ်လုံးမှအ၀တ် များကိုအကုန်ခဋ္ဌတ်ပစ်လိုက်.။၄င်းနောက်ရေချိုးကန်ထဲသို့ဆင်းမည်အပြုတွင်ရေချိုးခမ်း တံခါးပွင့်သွားသဖြင့်ဂလန့်ထိုးရန်အသွား ဘွားကနဲဒီပိုးက၀င်လာတော့.။ွှတွင်ခင်စောမြင့်က အို နေအုံးလေ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ကဋ္ဌန်တော်လဲ တခါထဲချိုးမှာပေါ့ မမမြင့်ပြီးတော့မှချိုးပါ ဟင့်အင်း မမမြင့်ရယ် တခါထဲနှစ်ယောက်အတူတူချိုးရအောင် ဒီပိုးသည်စကားမဆုံးခင်မ၀တ်များခဋ္ဌတ်ပြီးဖြစ်သွားလေ.၊myanmar love stories (19)
myanmar love stories (19) ဒီပိုး (၅)
myanmar love stories (19)မင်းလေးဟာလေ ကဲကိုကဲတယ် ဘိုးကဲ ကဋ္ဌန်တော်ကဲတာမဟုတ်ပါဘူး သူမမမြင့်ရဲ့ သူ သူ ဒီပိုးကအကြောများထောင်၍ပြောင်တင်းမာတောင်ပြီးဒစ်ကြီးပြဲနေသော သူ.လီးကြီးကိုကိုင်၍တော့တော့ပြလိုက်လေ.၊ အမလေး ကြောက်စရာကြီး ကြည့်ပါအုံးနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး အို ကြီးတော့ပိုမကောင်းဘူးလား ကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ ကြည့်ရတာ ကြောက်စရာကောင်းလို့ပြောတာ ဒီလောက်ကြီးအောင်ဘယ်လိုများလုပ်ထားတယ်မသိဘူး ကြည့်ပါအုံး ခင်စောမြင့်ကကြောက်စရာကောင်းအောင်ကြီးလှပါသည်ဆိုသောလီးကြီး ကိုပင်လှမ်း၍ဆွဲလိုက်ပြီးနောက် လထစ်ကြီးကိုဖြဲချီသွင်းချီလုပ်ခါမျက်စိအရသာခံ နေသည်တွင်ဒီပိုးကလဲခင်စောမြင့်.စောက်ပတ်ကိုလှမ်းနှိုက်လိုက်ပြီးနောက်လက် ဍှိုးဖြင့်စောက်ခေါင်းတွင်းသို့ထိုး၍မေ$ပေးလိုက်ရာစီးထန်းထန်းအရည်များထွက် လာလေ.၊ အား ယားတယ် ယားတယ် ကြမ်းလှချည်လားကွာ ကဲ လုပ်ကြစို့ ခင်စောမြင့်သည်အနီးမှခါးစောင်းလောက်အမြင့်ရှိသောခုံလေး.အစွန်းတွင် ထိုင်ချလိုက်ပြီးနောက်သို့ပက်လက်လှန်၍အိပ်ချလိုက်လေ.။ခြေနှစ်ချောင်းမှာမူ အောက်တွင်ထောက်ထားလေ.၊ပုံစံမှာ မတ်တတ်ရပ်နေရာမှနောက်ကျောကိုသာ ခုံပေါ်တွင်လှန်၍အိပ်ချလိုက်သော်လည်းခြေထောက်တို့မှာအောက်တွင်ထောက် ထားမြဲထောက်ထားသဖြင့်ခါးကြီးကိုကော့ပြီးပက်လက်လှန်ထားသည့်ပုံစံဖြစ် သဖြင့်စောက်ပတ်မှာကော့ထားသောပေါင်နှစ်လုံးကြားမှကြွ၍တက်နေလေတော့ သည်၊ ဒီပိုးသည်ကော့လှန်၍ထားသော ခင်စောမြင့်.ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် တည့်တည့်ဝင်၍ရပ်လိုက်ရာလီးနှင့်စောက်ပတ်မှာအနေတော်ဖြစ်နေ.။ဒီပိုးသည် သူ့လီးကိုစောက်ပတ်ထည်းသို့မသွင်းသေးဘဲ စောက်ပတ်နခမ်းသားနှစ်ခုကိုလက် မနှစ်ခုဖြင့်ဖိ၍ဖြဲလိုက်ရာ စောက်ပတ်မှာအစွမ်းကုန်ပြဲသွား၍အတွင်းသားများမှာနီ ရဲလျက်ရှိနေလေတော့.၊ထိုကဲ့သို့နီနီရဲရဲနှင့်ပြဲပြဲကြီးဖြစ်နေသော စောက်ပတ်အ လယ်တွင်မာ၍ပြားပြားခဋ္ဌန်ခဋ္ဌန်လေးဖြစ်နေသည့်စောက်စေ့လေးမှာငေါက်တက် တက်နှင့်ပြူထွက်နေလေ.။ဒီပိုးသည်စောက်စေ့လေးအားလက်ဍှိုးနှင့်လက်မ ဍှပ်ခါဆွဲကြည့်လိုက်စဉ်ပက်လက်လှန်၍ဇိမ်ယစ်နေသောခင်စောမြင့်မှာတွန့်ကနဲ ကော့တက်သွားလေသည်။သို့သော်လည်းဆက်၍မှိန်းနေလိုက်ပြန်သည်၊ ဒီပိုးသည်ွှမျှနှင့်အားမရနိုင်သေးဘဲစောက်စေ့လေး.ဘေးပတ်ချာလည် ကိုရစ်ပါတ်ခါပယ်ပယ်နယ်နယ်လက်ဍှိုးနှင့်ထိုး၍မေ$မေ$ပေးလိုက်ရာစီးထန်းထန်းအရည်များ မှာတစိမ့်စိမ့်ထွက်လာရာမှတဖြေးဖြေးများလာပြီး ခင်စောမြင့်မှာလည်း ဟင်း ကနဲနေအောင်သက်ပြင်းရှည်ကြီးချရင်းညီးလိုက်လေ.၊ ခင်စောမြင့်မှာ စောက်ပတ်မှတဆင့်အကြောပေါင်းတထောင်ဆိမ့်ဝင်သွားသဖြင့်အလွန်အမင်း ယားလာသည့်အတွက်အငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲခါးကိုကော့ကာတွန့်ကနဲတွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး စောက်ပတ်မှာတဆတ်ဆတ်နှင့်ငါးဘဟက်များလိုရဲနေသောအတွင်း သားများကပွစိပွစိဖြစ်လာပြီးစောက်ရည်များကလဲစောက်ပတ်.အကွဲကြောင်းမှနေ ၍ဖင်အောက်သို့စီးကျလျက်ရှိနေလေ.၊ ဒီလောက်ဆွရ ကလိရရင် တော်ရောပေါ့ကွယ် ပဌမတန်းစားအနှိပ်သယ်လေးဒီပိုးကဘာမျှပြန်မပြောဘဲစောက်ခေါင်းတွင်း ကိုသာလက်နှင့်မေ$ပေးနေရာမှရှေ့သို့ကုန်း၍ခုံးခုံးကြီးဖြစ်နေသောနို့အုံကြီး.ထိပ် ဖူးနို့သီးခေါင်းလေးကိုပါးစပ်ဖြင့်ငုံ၍နို့သီးခေါင်ကိုလျှာဖျားဖြင့်ကလိပေးသည့်အခါတွင်ခင်စော မြင့်မှာအောက်မှနေ၍ငါးဖယ်ပျံသလိုထွန့်ထွန့်လူးမျှမနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာပြီးခြေဖျားလေးများကုတ်လက်ဖျားလေးများဆုတ်ထားမိလေ.၊ထိုခ%့ ခင်စောမြင့်.သေးသေးမျှင်မျှင်ကြည်လင်ခြင်းမရှိသော တ%ှာသံလေးမှာမတိုးမ ကျယ်ထွက်လာ.၊ မောင် ဟင် ဒီပိုးမှာကားရိုးနေပြီဖြစ်သဖြင့်အိနြေရြရပင်ထူးလိုက်.၊ ဒီလိုနဲ့ဘဲပြီးရတော့မှာလားမောင် မြင့်မနေတတ်တောဘူး မြင့်ကိုသနားပါအုံး လားမောင်ရယ် ခင်စောမြင့်. သေးသေးမျှင်မျှင်အသံလေးကားကြားရသူ.နားနှင့်ဝေး၍ဝေး ၍သွားပြီးမျက်တောင်လေးများစင်းခါမျှင်းမျှင်းလေးနှင့်ဟင်း ကနဲသက်ပြင်းချသွား သည်မှာသနားစရာပင်ကောင်းနေ.။ဒီပိုးကတော့မလျှော့သေးသည်အတွက် ခင် စောမြင့်ကပင်ထပ်၍ဆက်လိုက်ပြန်.၊ မောင် စင်းနေသောမျက်လုံးအစုံကိုမပွင့်တပွင့်ဖွင့်၍ဆိုလိုက်ပြန်.၊ ဟင် ဒီပိုးကတော့ထုံးစံအတိုင်းပင် ဟင် တလုံးတည်းထွက်လာ.၊ မြင့် ယားလှပြီ တအားထိုးပြီးလိုးထည့်လိုက်ပါတော့ ယခုမှပင်ဒီပိုးကလိုးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဟုယူဆလိုက်၍ လီး ကိုလက်ဖြင့်သေသေချာချာကိုင်ကာ စောက်ပတ်ကိုနာနာဖြဲ၍ရဲနေသောစောက် ခေါင်းဝသို့တေ့ပြီးတ၀က်လောက်ဝင်သွားအောင်သွင်းလိုက်ပြီး စောက်ပတ်တွင်း တွင်စိမ်၍ထားလိုက်.၊ ထိုးသွင်းလိုက်ပါမောင် ထိုးသွင်းလိုက်စမ်းပါ အဆုံးသွင်းပါ အမှန်ဆိုရသော်ဒီပိုးကိုယ်တိုင်ကလည်း ခုအချိန်တိုင်မအောင့်နိုင်တော့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် လီးကိုအရင်းရောက်သည်အထိထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်၊ အောင်မယ်လေးတော့ ကောင်းလိုက်တာနော် ကဋ္ဌတ်ကဋ္ဌတ်ကဋ္ဌတ် ဟင်း ဒီပိုးသည်စိတ်ကလဲထလူကလဲရွလာပြီဖြစ်သည့်အတွက်ဆက်ခါဆက်ခါမ နားတမ်းဒလကြမ်းလိုးလေ.၊ခင်စောမြင့်ကလည်းဖင်ကိုကြွ၍ကော့ကော့ထိုးပေးနေသည်နှင့် အတူဒီပိုးကလဲရိုးရိုးလိုး၍အားမရသဖြင့်ဆောင့်ဆောင့်လိုးလေ.၊ ဒုတ် ဒုတ် အောင်မယ်လေး ဒုတ် ဒုတ် အောင်မယ်လေး ကောင်းလှချည်လား မောင် ဆောင့်ပါခုနလိုဆောင့်စမ်းပါ ဒုတ် ဒုတ် ဟုတ်ပြီဆောင့် နာနာဆောင့် ဒုတ် ဒုတ် အောင်မယ်လေး အရသာရှိလိုက်တာ ဒီပိုးကားအာဂဒီပိုးပါပေ။နို့နှစ်လူံးကိုဆွဲ၍တအားတအားကုန်းကုန်းလိုးလေ ရာ ခင်စောမြင့်.စောက်ပတ်မှာအရည်များရ$ဲနေပြီဖြစ်သည့်အလျောက်အသံများ ပင်ထွက်လာတော့သည်၊ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ခင်စောမြင့်ကွှမျှနှင့်အားမရသေး၍လားမသိ။ စောက်ပတ်ကိုအပေါ်သို့ ကြွကြွပြီး မမပေးနေ.၊ အောင်မယ်လေး ၀င်လိုက်တာ ရင်ခေါင်းထဲကိုရောက်သွားတာဘဲ လီးကကြီး ရုံတင်မကဘူးရှည်လဲရှည်ပါ့ အဲဒီလို လီးကြီးပြီးရှည်သမျှဟာ ကောင်းဖို့ချည်းဘဲမဟုတ်လား ဟုတ်ပါသတော် ဟုတ်ပါသတော် လိုးမှာသာစိတ်ပါလက်ပါလိုးစမ်းပါ ဒီပိုးသည်နသိုးကြိုးပြတ်ပမာတအားထိုးတအားဖိလိုးလိုက်ရာ လိုးသူရောခံ သူပါမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေလေ.၊ အား ကောင်းလှချည်လားမောင် အမလေး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် အရသာရှိ လိုက်တာ ဒီပိုးကားတချိုးထဲယူလေပြီ၊ ဆောင့် ဆောင့် ဟုတ်ပြီ ဆောင့် အမလေးအသဲကိုခိုက်သွားသာဘဲ ဆောင့် လိုး ထိုးထည့် မောင် ဟင် စောက်ပတ်ကွဲချင်ကွဲ ပြဲချင်ပြဲသွားပါစေတော့ တအားလိုးစမ်းပါမောင်ရယ် ကောင်းလွန်းလို့ပါ ဒုတ် ဒုတ် ဒုတ် ဒုတ် အား အမလေး အမေ့ တ%ှာကြီးလှသောခင်စောမြင့်မှာအရမ်းဖြစ်လာလေတော့.။အလိုးခံ၇သည် မှာထိထိမိမိရှိလှသဖြင့်အရသာလွန်ကဲပြီးပေါင်နှစ်လုံးကိုအတင်းဖြဲပေးထား.၊ လိုးထည့် ထိုးထည့် ဟုတ်ပြီ နေရာမရေ$့ဘဲခုအတိုင်း ၄ ၅ ချက်လောက်myanmar love stories (19)
myanmar love stories (19)ဆောင့်လိုက်စမ်းပါ ဒီပိုးသည်အားရှိသမျှတအားဖိကာအစွမ်းကုန်ကြုံး၍လိုးထည့်လေတော့.၊ အောင်မယ်လေး ကောင်းလိုက်တာမောင် မြင့်ဖြင့်လေအသက်ရှူတွေတောင် မှားကုန်ပြီ အ၇သာရှိလွန်းလို့ မြင့်စောက်ပတ်ထဲမှာဆိမ့်နေတာဘဲမောင်ရာ လိုး စမ်းပါ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ထိုး လိုးလိုး လိုးထည့် ဟင်း ခင်စောမြင့်သည်အသက်ကိုအောင့်ထားရသဖြင့် ဟင်းဆိုသောသက် ပြင်းချသံမှာကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးခြေကားယားလက်ကားယားဖြင့်နှစ်ဦး သားပြိုင်တူပြီးသွားကြလေသည်၊ ( ၅ ) ဒီပိုးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင်တအိမ်လုံးမှာတိတ်ဆိတ်နေသော်လည်းသိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲဖြစ်သွားသည်ကိုသတိထားလိုက်မိသည်နှင့်အခြေအနေကိုအလွယ်လေး နှင့်နားလည်လိုက်၍ အင်း အလုပ်ဖြစ်နေကြပြီ ဟုအတတ်တွေလိုက်ခါ အ လိုက်သိစွာနှင့်ဧည့်ခန်းမှကုလားထိုင်တလုံးပေါ်သို့ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်ရင်း အပန်းဖြေနေလိုက်သည်၊ အလုပ်ဖြစ်နေသောအခန်းမှာသူ့ကျောဖက်ကပ်ရက်အခန်း.နောက် မီးဖိုနှင့်တဖက်တချက်တွင်ရှိသောအခန်းဖြစ်သည်ကိုလည်းသိထားလေ.။အ ကြောင်းမှာ သူထိုင်နေသောဧည့်ခန်းနှင့်ကပ်ရက်အခန်းမှာဒေါ်နုနုခင်အိပ်သော အခန်းဖြစ်၍၄င်းအခန်းမှာအလုပ် လုပ်ရန်သီးသန့်ထားသောအခန်းဖြစ်သည့်အ တွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်၊ထိုအခန်းမှာပင်သူကိုယ်တိုင်အ၀င်းကိုနတ်ပြည်သို့ပို့ခဲ့သည်မ ဟုတ်ပါလော၊ ဒီပိုးသည်သူရောက်ပြီးသည်မှစ၍သောက်နေသောစီးကရက်မှတ၀က်မကျိုး ခင်သူ့နောက်ရှိအခန်းတွင်းမှလှုပ်လှုပ်ရွ၇ွဖြစ်နေသောအသ့ကိုထပ်မံ၍ကြားလိုက်ရ ပြန်လေသည်၊ (အင်း မမတို့ကတော့လောဘကြီးတဲ့ဘ၀မှာကိုယ်အိပ်ခန်းကိုတောင်မ ရှောင်တော့ဘဲဘယ်သူတွေကိုများလ$တ်ပေးထားပြန်သလဲမသိပါဘူး) ဟူ၍တွေး တောမိနေပြန်လေ.၊သို့အတွက်အခန်းဝသို့အသာသွားခါ ကလကာကိုဖြေးဍှင်း စွာဖယ်၍ကြည့်လိုက်မိလျှင်ကြည့်လိုက်မိခြင်း ပဌမအံ့သြသလိုဖြစ်သွား.၊နောက် မှ (အင်း ဒါလဲအကွက်ဘဲ ) ဟူ၍မှတ်ချက်ချပြီးဆက်၍ကြည့်နေလိုက်မိသည်၊ အခန်းတွင့်းဒေါ်နုနုခင်.ကုတင်ခြေရင်းဘက်တွင်အမျိုးသမီးတဦးသည် ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်ကာနောက်ဖေးခန်းထဲမှသဲကြီးမဲကြီးဇွဲနဘဲကြီးကြီးနှင့်ပျော်မြူး နေကြသူနှစ်ဦးကိုကြည့်၍ပီတိဖြစ်လျက်သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေလေသည်၊ ပေါင်ကိုကားထားပါ နောက်ဖေးခန်းအတွင်းမှယောင်္ကျားအသံ၊ ကားယုံတင်မကဘူး ဖြဲပေးမယ် ကဲ ရော့ နောက်ဖေးခန်းအတွင်းမှပင် ထွက်လာသော ခင်မြ.အသံ။ ဇက်တိုက်ထွက် ပေါ်လာသောအသံများမှာကား ဘွပ် ဘွပ် ဘွပ် ဘွပ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ရင်ခေါင်းထဲကိုအောင့်သွားတာဘဲ လူကိုများနွားမလို့ အောင်းမေ့နေသလားမသိဘူး ဟင်း စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ကောင်းလိုက်တာရှင် အဲဒါသိပ်ထိတာဘဲ အမလေး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် လိုး ပါ လိုးပါ အားနဲ့လိုးပါ ဟုတ်ပြီ လိုးလိုး ဆောင့်လိုး ဒုတ် ဒုတ် ဒုတ် ဒုတ် အောင်မယ်လေး ကောင်းလိုက်တာ အသဲကိုခိုက်သွားတာဘဲ ဒီပိုးသည်အသံများကိုကွဲကွဲပြားပြားကြားရသည့်နှင့်အမျှ ခင်မြတယောက် ဘယ်လောက်အထိရက်ရက်ရောရောအလှူပေးနေသည်ကိုသိရလေသည်၊ထိုနည်းတူစွာရှေ့ခန်း တွင်းမှအမျိုးသမီးကလည်းကြားမြင်ရုံသာမကသူကိုယ်တိုင်ပင်လှုပ် လှုပ်ရွရွဖြစ်နေလေ.။ထိုအမျိုးသမီးကားအခြားသူမဟုတ်။အပျိုကြီးပူပူနွေးနွေး မခင်လေးပင်တည်း၊ မခင်လေးသည်ခါတိုင်းလိုပင် ဒေါ်နုနုခင်အိမ်သို့လာရာမှအိမ်ရှေ့ခန်းတွင် တယောက်မှမတွေ့ရသည့်အတွက်နောက်ဖေးသို့ဝင်ကြည့်ရန်အသွားကြားလိုက်ရ သောအသံများကြောင့်ယခုကဲ့သို့ဒေါ်နုနုခင်.အိပ်ယာသို့ဝင်ကြည့်နေမိရင်းက စိတ်တွေထပြီးစောက်ပတ်ကပါရွလာသောကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဘာတွေဖြစ်၍ဘာ တွေလုပ်နေမိမှန်းပင်မသိအောင်သတိလက်လွတ်နေခြင်းဖြစ်ပေ.၊ သူမသည်တဖက်ခန်းသို့ရရာအပေါက်မှကြည့်လိုက်ရာတွင် ခင်မြမှာအ၀တ်မ ပါဘဲကိုယ်တုံးလုံးနှင့်ပက်လက်လှန်၍ခံနေသလို။ယောင်္ကျားတယောက်ကလည်းသူ့နည်းတူစွာ က၀တ်မပါဗလာကိုယ်လုံးတီးနှင့်ခင်မြ.ဂုတ်ပိုးကိုဆွဲဆွဲပြီးလိုးနေ သည်ကိုအထင်းသားတွေ့ရလေ.၊ မခင်လေးသည်ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းအားကျလာမိလေ.။လီးကြီးကခင်မြ စောက်ပတ်တွင်းသို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေပုံမှာကြည့်မ၀အောင်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှသူ့ စောက်ပတ်လေးကရွလာ.။ဒီလီးကြီးထိုးသွင်းထားသော စောက်ပတ် ဟာ ငါ့စောက်ပတ်သာဖြစ်လိုက်ရင်။ွှသို့သောအတွေးများပေါက်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင်ကားစောက်ပတ်တွင်းမှယားလာသည်။ရွလာသည်။ယားသထက် ယား။ရွသထက်ရွပြီးပွစိပွစိဖြစ်လာကာအရည်များပါယိုစီးကျဆင်းလာသည့်အတွက်သူ့ဖင် အောက်တွင်စိုစိစိုစိဖြစ်နေလေသည်၊ရင်တွင်းမှလည်းတဒုံးဒုံးနှင့်အုံးအုံး ကြွက်ကြွက်ဆူပွက်နေသည်သာမကမျက်လုံးလေးမှာနီရဲလာ၍နှုတ်ခမ်းများပါတဆတ်ဆတ်တုန် ကာရင်မောလာသဖြင့်အသက်ရှူသံများလည်းပြင်းတန်လာလေ.၊ စောက်ပတ်ကလဲပြဲလိုက်စိလိုက်နှင့်ခံချင်စိတ်တို့မှာတားမရအောင်တဖွား ဖွားအေးလာသည်နှင့်အမျှဘယ်လိုမှအောင့်အီးကြိတ်မှိတ်၍မရတော့သည့်အဆုံးတွင်တဖက်ခန်း မှ လီးကြီးသည်ခင်မြ.စောက်ပတ်အတွင်းမှထွက်လာပြီးနောက် အဖျားနားအရောက်တွင်ပြန်ထိုး၍အဆုံးထိသွင်းလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူ. သူ.လက်ဍှိုးသည်အသုံးတော်ခံဘ၀သို့တမဟုတ်ခြင်းရောက်သွားကာအရည်များရ$ဲနေသော စောက်ပတ်တွင်းသို့ထိုးသွင်းလိုက်မိလေတော့သည်၊ လက်ကိုလီးအမှတ်ထား၍အားရပါးရထိုးထိုးသွင်းရင်းတအင်းအင်းနှင့် ဖြစ်နေ.။ထိုသို့အကြောပေါင်းတထောင်ဆိမ့်၍ဇိမ်ရှိနေစဉ်အတွင်း စောက်ပတ် တွင်းသို့ထိုးထည့်နေသောလက်ကိုတစုံတယောက်ကဖမ်းဆွဲလိုက်ရာမခင်လေးမှာ ဖျပ်ကနဲလန့်သွားပြီးဝင်လာသူအား အလန့်တကြားကြည့်လိုက်ရာ မျက်လုံးအ ကြောင်သားနှင့်ဘာစကားမှမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားလေ.၊အခန်းတွင်းသို့ဝင် လာသူမှာဒီပိုးသာဖြစ်၍လုံချည်မပါဘဲအောက်ပိုင်းဗလာကျင်းပြီးလီးကြီးကိုလက်က ကိုင်ရင်းဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲလှုပ်ပြနေလေ.။ဒါကိုပင်မခင်လေးမှာစိုက်ကြည့်နေမိရှာ လေသည်၊ ၄င်းပြင်သူ့အပေါ်တွင်ကြီးလေးသောအပြစ်ကြီးတခုကျရောက်ကျူးလွန် နေသည်ကိုလူမိသွားလေပြီဟူသောအတွေးမျိုးပေါက်ခါရှက်ကြောက်ထိတ်လန့်နေလျက်သူပြုသ မျှခံရတော့မယ်ဟူသောအခြေသို့ရောက်နေသဖြင့်ဒီပိုးကိုဘာပြောရ မှန်းမသိ။ပြောစရာလည်းမရှိ။ပြောလည်းမပြောနိုင်ဘဲထမိန်အောက်စလွတ်၍ ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်နေသည့်စောစောကအတိုင်းမလှုပ်မရှက်မှင်သက်မိနေစဉ်ဒီပိုး ကလည်းလျင်မြန်စွာသူ့ရှေ့မှာမျက်နှာချင်းးဆိုင်ထိုင်ကာသူ့ စောက်ပတ်ဝသို့လီး ကြီးနှင့်လာတေ့လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးနောက်သူ့ကြောပြင်အားဒီပိုးကဆွဲ၍ ဖက်လိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးသူမစောက်ပတ်ထဲသို့မာကြောကြောအချောင်းကြီးထိုးဝင်လာ သည်ကိုထွန့်ကနဲခံစားလိုက်ရသည်ကိုနောက်ဆုံးသိလိုက်ရင်းကသူ့ လက်နှစ်ဖက်ကလဲဒီပိုး.ကြောပြင်ကြီးကိုဟီးလေးခိုသလိုပြန်ဖက်လိုက်မိလေ တော့သည်၊တယောက်ကိုတယောက်မိနစ်ဝက်လောက်ဖက်၍ထားပြီးမှဒီပိုး ကစလိုက်.၊myanmar love stories (19)
myanmar love stories (19) ဒီပိုး (၇)
myanmar love stories (19)မခင်လေး ရှင် ရှက်နေသလား အို ဟို ဟိုဒင်း ကဋ္ဌန်မတော့ဒုကျှဘဲ ဘာဒုကျှရမှာလဲ အို ဒုကျှပါဘဲရှင် ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာ ဒုကျှပါဘဲ ဘယ်သူတွေများမြင် သွားကြသေးလဲမသိဘူး ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူး ကဋ္ဌန်တော်တယောက်ထဲပါ ကဲပါလေ ခုမှတော့ရှက်မနေ ပါနဲ့တော့ ဘယ်သူကိုမှမပြောလိုက်ပါနဲ့ကိုဒီပိုးရယ် ကဋ္ဌန်မတောင်းပန်ပါတယ် နော်ကိုဒီပိုး ကဋ္ဌန်မကိုသနားရင် ဘယ်သူမှမပြောလိုက်ပါနဲ့ရှင် စိတ်ချပါ ဘယ်သူကိုမှမပြောပါဘူး မမကိုတောင်မပြောဘူး ကဲ ကျေနပ်ပြီလား လီးနှင့်စောက်ပတ်မှာတပ်ထားရက်တန်းလန်းပင်ရှိနေသေးသည့်အ တွက် ဒီပိုးသည်လီးကိုမခဋ္ဌတ်ဘဲ မခင်လေးကိုတွန်းလှဲလိုက်ရာ မခင်လေးမှာပက် လက်လန်ကျသွားပြီးဒီပိုးကအပေါ်မှထပ်ရက်သားပင်ပါသွားလေတော့သည်၊၄င်း နောက်ဒီပိုးသည်မခင်လေး.ပန်းနုသွေးရောင်လနေသောပါးလေးနှစ်ဖက်ကိုဘယ် ပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက်.။မခင်လေးမှာကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်အ ကြောက်အကန်ငြင်းဆန်ရုန်းကန်၍လည်းမဖြစ်သဖြင့်ခေါင်းလေးကိုဘယ်ညာရမ်း၍ဒီပိုး. နခေါင်းသရမ်းနေသည်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်နေရ.၊ ဒီပိုးကလည်းပါးလေးနှစ်ဖက်ကိုမရမက၀အောင်နမ်းပြီးမှဖင်ကိုအသာကြွ၍ လီးကိုနှုတ်လိုက်ပြီးနောက် အဖျားနားအရောက်ထွက်လာသောလီးကိုနောင်တချီ ထိုးသွင်းလိုက်ရာမခင်လေး.စောက်ပတ်မှာစောစောကပင်အရည်များရွဲနေသဖြင့် ခဲရာခဲဆစ်ဖြစ်မနေဘဲရှောကနဲဝင်သွားလေ.၊ အမလေး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ်အရမ်းမလုပ်ပါနဲ့ ကိုဒီပိုး ကဋ္ဌန်မ မခံနိုင်ဘူး ဒီပိုးကနောက်တချက် ခပ်ဖိဖိလေးလိုးထည့်လိုက်ပြန်လေသည်၊ အားစပ်တယ် စပ်တယ် ကွဲသွားပြီလားမသိဘူး စပ်လိုက်တာနော် ဟင်း တော် ပါတော့ ကဋ္ဌန်မကိုခွင့်လွတ်ပါနော်ွှအချိန်တွင်ဘာလိုနေသည်ကိုဒီပိုးကသိလိုက်သဖြင့်မခင်လေး.ပါးစပ် နှင့်နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာခပ်နာနာလေးစုတ်ယူလိုက်ပြီးသူမ.အပေါ်အာကိုလျှာ ဖျားလေးဖြင့်ကလိပေးလိုက်.။၄င်းနောက်မခင်လေး.လျှာဖျားလေးကိုစုတ်ယူ လိုက်ပြန်ရာမခင်လေးမှာမျက်တောင်လေးစင်းပြီးရင်လေးကပါကော့တက်လာ၍ စောက်ဖုတ်လေးပါကြွတက်လာလေ.၊ထိုခ%့မခင်လေးမှာအသဲခိုက်အောင်အရသာထူးကိုခံ စားလိုက်ရပေသည်၊ မခင်လေး ဟင် နာသေးလား ဟင့်အင်း မခင်လေးမှာစကားများများမပြောချင်တော့၍လားမသိ။ဟင့်အင်း ဟူ၍ သာပြောဘော်ရတော့.။ဘယ်လောက်ပင်လိုးလိုးတပါတ်မဍှိုးဘဲစောက်ပတ်အ မျိုးမျိုးကိုဒိုင်ခံလိုးဘူးသောဒီပိုးမှာအလိုးမှာပဌမ။အချမှာဝိဇာဆိုသည့်အတိုင်းဘယ် လိုမိန်းမမျိုးကိုဘယ်လိုလိုးပြီးဘယ်လိုထအောင်ဆွရမည်ကိုသိနေသူဖြစ်သဖြင့်န ဂို၇်ကပင်စိတ်ရောကိုယ်ပါရွပြီးသားဖြစ်နေသောမခင်လေးမှာမည်သည့်အခြေသို့ ဆိုက်ရောက်သွားမည်ကိုသိနိုင်လောက်ပေသည်၊ ပမာနှိုင်းရလျှင်နဂို၇်ကပင်ကြွေချင်ရဲ့ရဲ့အဍှာလွယ်လျက်ရှိသောပင်မှည့်သီး လေးပမာထိရုံမျှနှင့်ဘုံးဘုံးကြွေကျမြေခရသလိုဆိုလျှင်လည်းထိုနည်းအတိုင်းပင် ဖြစ်ရပေတော့မည်၊ွှအတိုင်းဆိုလျှင်အဍှာလွယ်လွယ်နှင့် မှည့်နေသော မခင် လေးကိုဒီပိုးကထိလိုက်သည့်အခါသူ့ခမျာမျက်တောင်လေးများစင်းပြီး ဟင်း ကနဲ သက်ပြင်းတချက်သာချနိုင်ရှာတော့သည်၊ မောင် သက်တူရွယ်မျှပေမို့မခင်လေးကအရသညရှိရှိနှင့်ခေါ်လိုက်.၊ ဘာလဲအသက် ဒီပိုးကလည်းဍုသည့်ဘက်တွင်သူ့ထက်သာ၍သွားလေပြီ၊ ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် မောင်လည်းဒီလိုပါဘဲ အသက်ရယ် ဒါဖြင့်ရင် ခပ်နာနာထိုးပြီး လိုးပေးစမ်းပါ မောင်ရယ် ဒီပိုးက အလိုးဖက်ကတော့စိတ်ချရသည်။သူ့ဖင်ကိုကော့ကော့ပြီးအားစိုက် ၍မခင်လေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် လိုးလိုးထည့်လေ.။ဆောင့်လေ.၊ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ။ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် အောင်မယ်လေး အောင်မယ်လေး အား လား လား လား ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကောင်းလှချည်လား မောင်ရာ ဒီပညာတွေဘယ်ကများသွားသင်ပါလိမ့် ဟင်း မခင်လေးသည်ကောင်းလွန်းလှသဖြင့်သူ့တင်ပါးကို မမပေးလိုက်။ဒီပိုး.ခါး ကိုဖက်၍ခိုပြီးဖင်ကိုမြှောက်၍ မြှောက်၍ပေးလိုက်နှင့်နေမထိထိုင်မသာဘာကိုမှ သတိမရ။အရှက်အကြောက်များပျောက်ခါ လေဟုန်စီးပြီးနတ်ပြည်ကိုရောက်နေ သည်ဟုထင်မှတ်နေလေသလားမသိ။အောက်မှတအင်းအင်းနှင့်အတင်းဖြဲဖြဲခံနေ လေ.၊ အရသာရှိလိုက်တာ အသက်ရာ ဟောဒီစောက်ပတ်ကြီးနဲ့မခဋ္ဌတ်တန်းဘဲ စွတ်ထားချင်တယ် ဒီကလဲဒီလိုပါဘဲရှင် မောင့်လီးကြီးကိုအရင်းကဖြတ်ပြီးဖူးဆို့ ဆို့သလို ဆို့ထား ချင်တာဘဲ ကဲ လိုးလေ ဒီပိုးကားဆက်၍ ဆက်၍အားသွန်ခွန်စိုက်မနားတမ်းလိုးနေပြန်သည်၊ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ကောင်းလိုက်တာမောင်ရာ လိုးပါ လိုးစမ်းပါရှင့်နာနာ အမလေးကဋ္ဌတ်ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် အစကဒီလောက်ကောင်းမှန်းမသိဘူး ဒီပိုးသည်မြန်မြန်လိုးနေရာမှခပ်မှန်မှန်ထိုးရင်လိုးနေပြန်လေသည်၊ အို မြန်မြန်လိုးစမ်းပါ အောက်ကလူဖြင့်ယားလို့သေတော့မယ် ဟား ဟား ဟား ဟား အဲဒီလို ယားလေ အရသာရှိလေဘဲ ကြည့်ပါလား သူဇိမ်ယူနေပြန်ပြီ အဲဒီလို ဇိမ်ယူပြီးလိုးမှအရသာရှိတာ ဇိမ်ယူချင်ရင်နောက်မှတခါယူပါ အခုမြန်မြန်လိုးစမ်းပါ ကဋ္ဌန်မယားလွန်းလို့ ထိုအခါဒီပိုးကခပ်နာနာလေးအားစိုက်၍လိုးလိုက်ပြန်သည်၊ အမလေး အဲဒါသိပ်ကောင်းတာဘဲ ခုလိုဘဲလိုးပါ ရော့မသွားပါစေနဲ့ မခင်လေးသည်ဒီပိုး.ခါးကိုတအားဖက်၍ကုတ်ခြစ်နေမိလေ.၊ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အား ခုအတိုင်း မြန်မြန်လိုး မြန်မြန်လိုး ကောင်းလိုက်တာနော် ဘ၀င်ကိုခိုက် သွားတာဘဲ မခင်လေး ရှင် ပြီးခါနီးပြီလား အို မသိဘူး လိုးမှာလိုးပါ ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် အရသာရှိလိူက်တာနော် အာဂဟာမလေးပါပေ (ဒီတ%ှာအိုးမလေးကိုတော်ရုံနဲ့တော့ရမယ်မထင် နင်ဘဲခံနိုင်မလား ငါဘဲလိုးနိုင်မလား စောက်ပတ်ထဲမှာလီးဘဲကျိုးပြီးကျန်ရင်ကျန် ခဲ့ပါစေတော့ ဒီပိုးတဲ့ကွသိကြရောပေါ့ ) ဒီပိုးကွှအတိုင်းပင်စိတ်ထဲတွင်ရေ ရွတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးပန်းအ၀င်မှာသုတ်ခြေတင်၍တကြိုးထဲယူလေတော့.၊ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် ။ စွပ် စွပ် စွပ် စွပ် အမလေး ကောင်းလှချည်လားမောင် အဟင့် အဟင့် ကဋ္ဌန်မဘယ်လိုနေရ မှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးရှင် ဒီပိုးကခံနိုင်မှန်းသိသဖြင့်အားရပါးရ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးလိုက်ပြန်.၊ ဒုတ် ဒုတ် ဒုတ် ဒုတ် မခင်လေး.ဖင်မှာမြောက်၍မြောက်၍တက်သွားလေသည်၊ အောင်မလေး အမေ အမလေး သေပါပြီ မောင်ရယ် နဲနဲရှော့ပါအုံး ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ကဋ္ဌတ် ခ%လေးအောင့်ခံလိုက်ပါ ပြီးပါနီးပြီ ဖြဲပေး ဖြဲပေး ဟုတ်ပြီအဲဒီအတိုင်းနေ ဘွပ် ဘွပ် ဘွပ် ဘွပ် ဟင်း အင်း အင်း အင်း ဒီပိုးကနောက်ဆုံးတချက်ခပ်နာနာလေးနှစ်လိုက်သဖြင့်မခင်လေးသည် ဟင်းကနဲ သက်ပျင်းချလျက် ခြေရောလက်ပါမသယ်နိုင်တော့ဘဲ ပက်လက်နှင့် မှောက်ရက်ထပ်ရက်သားခြေကားယားလက်ကားယားနှင့်နှစ်ဦးသားဆုံ၍ပြီးသွား ကြလေတော့.။သူတို့နှစ်ဦးသားလူခြင်းခွါ၍ထလိုက်ကြသည့်အခါမခင်လေး.ဖင်အောက်မှာအ ရည်များဖြင့်စိုရ$ဲနေလေ.။နောက်ဖေးခန်းမှနှစ်ယောက်မှာကားဘယ် နှစ်ချီများလိုးနေကြသည်မသိ။ယခုလက်တိုင်လိုးတုန်း-ခံတုန်းပင်ရှိနေကြလေသတည်း၊myanmar love stories (19)